Fact Sheet 2019 - Myanmar by Mae Fah Luang University - Issuu
၂၀၁၄ ခုနှစ် မယ်ဖါလွမ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား
မယ့်ဖါလွမ်တက္ကသိုလ်သည် အာဆီယံသုံးနိုင်ငံဆုံမှတ် မဲခေါင်ရွှေတြိဂံနယ်မြေ၏၀င်ပေါက်တံခါးဝတွင်တည်ရှိပါသည်။၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက သီခြားအုပ်ချုပ်သော တက္ကသိုလ် အ ဖြစ်) တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤတက္ကသိုလ်ကို ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ မယ်တော်မိဖုရားခေါင်ကြီး သီရိနာဂရင်ဒြာ မှ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းသားများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အကြင်နာကြီးစွာဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သူမကိုလေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မယ့်ဖါလွမ် တက္ကသိုလ်ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်နီးပါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် မယ့်ဖါလွမ် တက္ကသိုလ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အမြန်ဆုံးတိုးတက်လာ သောအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါသည်။ “ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှတက္ကသိုလ်” ဟူသောအယူအဆ အကျိုးတရားကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လာရောက်ကြသော ဧည့်သည်တော်များအားလုံးနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအားလုံးကို ပတ်ဝန်းကျင် ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရင်း စာပေပညာသင်ကြားလိုချင်စိတ်ကို ဆွဲဆောင်ဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။ပျော်ရွှင်ဖွယ် အရာများကို ခံစားကြည့်ရန် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်မှ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှလာတက်ကြသောကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးနှင့် ဒေသခံပြည်သူကျောင်းသားကျောင်း သူများ အချင်းချင်း ပူးတွဲဆောင်ရွက်တတ်ရန် ၊ပါဝင်ကူညီတတ်ရန်၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီစာနာတတ်ရန်တို့ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဦးတည်ချက် မဲခေါင်ဒေသ၏ ဦးဆောင် တက္ကသိုလ်ဖြစ်စေရန်
ဒဿန လူမှုဖွံ့ဖြိုးရန် ၊ အသိပညာ ပြုစုပျုးထောင်ိပေးရန်၊ ကိုယ်ရည်သွေး ကောင်းမွန်အောင်ပြုစုပျုးထောင်ိပေးရန်၊ ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ကျင့်တရားရှရန်ိနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တတ်စေရန်
အနီရောင်။။ တော်ဝင်မင်းသမီး သီရိနဂရင်ဒြာအားရည်ညွှန်းသည်။ ရွှေရောင်။	။ တက္ကသိုလ် ရာသက်ပန် အောင်မြင်စေရန် ကိုယ်စားပြုသည်။
တက္ကသိုလ်၏ ဘွ့ဝဲ တ်ရုံသည် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပို င်းလန်းနားမျုးနွိယ်စုတို့၏ ပုံစံဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ခြင်း နှင့် မင်္ဂလာရှသောသင်္ကေိတကို ဖော်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြက်လျှာစွန်းပုံတွင် နန်းတော်ပုံစံကောက်ကြောင်း ။	။တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကို ညွှန်းဆိုသည်။ ကြွက် ။ ။ တော်ဝင်မင်းသမီး သီရီနဂရဒြာမွေးဖွါးသည့် နှစ်ကိုရည်ညွှန်း သည်။ နဂါး ။	။ လန်းနားတို့အစဉ်အလာ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သော ရှေးပုံပြင် ထဲမှ မြွေကြီးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျား ။	။ တက္ကသိုလ်ပထမဦးဆုံး တည်ထောင်သည့် (၁၉၉၈) ခုနှစ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
ရင်ထိုးသင်္ကေတ တော်ဝင်မင်းသမီး သီရိနဂရင်ဒြာ၏ အမည်စာလုံးဖြစ်ပြီး တော်ဝင်မျိုးနွယ်၏အရေးပါခြင်းနှင့် အခွင့်ထူးအကျိုးကျေးဇူး ခံစားခွင့်ရရှိစေရန်အတွက် မယ်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ်၏ ရင်ထိုးအမှတ်သင်္ကေတအဖြစ် နတ်ရွာစံဘုရင် ဘူမိဘောအဒူရာဒတ် မှ ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရင်ထိုး(ကြယ်သီး)၏ အလယ်တွင်ပါသောထိုင်းစာလုံး (sor) နှင့် (wor) သည် တော်ဝင်မင်းသမီး သိရီနဂရဒြာကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းပါသည်။ ပန်းများနှင့် သစ်ရွက်များ သင်္ကေတမှာ တက္ကသိုလ်၏ နေထိုင်မှုပုံစံ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်မြင့်မားရမည် ဟူသောကတိကို ရည်ညွှန်းကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုင်းကိန်းဂဏန်း (၈) နှင့် (၉) သည်လည်းဘုရင် ရာမ (၈)နှင့် နတ်ရွာစံဘုရင် ရာမ(၉) ဘူမိဘောအဒူရာဒတ် တို့၏ မယ်တော် သီရီနဂရဒြာကိုပင် ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ဦးတည်ချက်များ • အလယ်အလတ်အရွယ်အစားရှိ ၊ အရည်အသွေးရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ဖြစ်ရန် • GMS ၏ပညာသင်ရာဌာနဖြစ်ရန် • လိုအပ်ပြီး အဓိကကျသော ပညာသင်အစီအစဉ်များကို ထောက်ပံ့ ဖန်တီးပေးရန် • ဘွဲ့ရအဆင့်မှာပင် သုတေသနများကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် • နေရာဒေသနှင့် လေးစားလိုက်နာရမည့် နိုင်ငံရေးမူဝါဒများကြား ညှနှို င်ိးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
တက္ကသိုလ်ကိုယ်စားပြု ပန်း လမ်ဒနွပ်န်း ။ ။ မြန်မာကံေ့  က်ာပန်း ၊ သရဖီပန်းကဲသ့ေို့ သာပန်းမျုးစိတ်
ကျောင်းသား/သူ စာရင်း (၂၀၁၈) စုစုပေါင်းကျောင်းသား ကျောင်းသူ
ပြိုင်ဖက်ကင်း ပြီးပြည့်စုံသော အသိပညာ
၆၅၁ (၃၃ နိုင်ငံ) ခေါင်းဆောင်မှု
ကမ္ဘာအနှံ့ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အရည်အချင်း
၄၄ အိတ်ချိန်း (Exchange) ကျောင်းသားကျောင်းသူ
အာဆီယံ (၁၀)နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ
၁ ။ ။ ကျောင်းလျှောက်ရန်လိုအပ်ချက် • ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ခြင်း(ဘာသာရပ်များထဲမှနှစ်သက်ရာတစ်ခုရွေးပါ)
၂ ။ ။လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ပြီးပို့ရန် • လျှောက်လွှာပုံစံကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များမှဒေါင်းလုတ်လုပ်၍ https://goo.gl/36rScH အွန်လိုင်းတွင် လျှောက်ရန်
International Affairs Division (IAD) Mae Fah Luang University 333 Moo 1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand E-mail: inter@mfu.ac.th Fax: +66 (0) 5391 6023
၃။ ။လက်ခံကြောင်းအကြောင်းပြန်စာ • အနီးစပ်ဆုံး ၄ ပတ်အကြာတွင် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်း ဖြင့်လက်ခံရရှိကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။ • အင်တာဗျူး လိုအပ်ပါက တယ်လီဖုန်း(သို့မဟုတ်) အင်တာနက် စကိုင်းဗွီဒီယို (Skypevideo call)ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။ အခြားအထောက်အထားများလိုအပ်ပါက အစီရင်ခံစာပို့လိုက်ပါမည်။ • အင်တာဗျူးအောင်ပါက လိုအပ်သောကျောင်းလက်ခံစာရွက် ၊ဗီဇာပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ပို့လိုက်ပါမည်။
၄။ ။ကျောင်းရောက်ရမည့်အချိန် • နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအားလုံးကျောင်းအပ်စာရင်းမသွင်းခင် တစ်ပတ်အလိုတွင် အရောက်လာရပါမည်။
၅။ ။ကျောင်းအပ်ခြင်း • လိုအပ်သောထောက်ခံစာမူရင်းများကိုမိတ္တူကူးပြီး ကျောင်းသား ရေးရာဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။ • တစ်ကြိမ်အမည်စာရင်းသွင်းပြီး ကျောင်းလခအပြည့်သွင်းပြီးပါက မယ့်ဖါလွမ် တက္ကသိုလ်၏ တရားဝင်ကျောင်းသားဖြစ်ပါပြီ။
သိပနှင့် နည်းပညာ အတွဲံ လူသားအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှု သိပ္ပံအတွဲ ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ အတွဲ
မယ်ဖွါလွမ် ဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက်များ ရိုးရိုးဘွဲ့
လျှောက်ထားသူသည် မယ်ဖါလွမ်တွင် ပညာသင်ကြားလိုသောဆန္ဒရရမည်ှိ ။
ထောက်ခံစာပါရှရမည်ိ။
အထက်တန်းကျောင်းအောင်လက်မှတ်(သို့) တန်း(သို့) GCEO-level (သို့) IGCSE (သို့) GED ထောက်ခံစာပါရှရမည်ိ။ ကျောင်းတက်ရောက်နိုင်ခွင့်ကို လျှောက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ မယ်ဖါလွမ် ကျောင်းမှ စဉ်းစား
ဖြေဆိုထားချန်ိ ၂နှစ် အတွင်းသာဖြစ်ရမည်။
လက်မှတ်ပါရှရမည်ိ။ •
- တိုဖယ် (ကွန်ပြူတာဖြေ)
- တိုဖယ် (အင်တာနက် ဖြေ)
- တိုဖယ် (တက္ကသိုလ်စစ်အစီအစဉ်ဖြေ)
Intensive English (အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း)
- တိုဖယ် (စာရေးဖြေ)
ဤလိုအပ်ချက်များကို တက္ကသိုလ်မှ ကြိုတင် ကြေညာခြင်း မရှိပဲ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာလိုအပ်ချက် - တိုဖယ် (စာရေးဖြေ)
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အားလုံး Intensive English (အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း) တက်ရောက်ရမည်။
မာစတာဘွ့ (သိဲု့) သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ထောက်ခံချက် (သို့) ရိုးရိုးဘွ့ (ဂဲုဏ်ထူးတန်း) ပြီးထားသော
အချို့သော ဘာသာရပ်များအတွက် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင် ကြောင်း ဖြေဆိုထားသည့် အမှတ်စာရင်းပါရမည် ။
တူညီသောအဆင့် ရှိသည့် (၁၂) တန်း (သို့) ၁၃
ဘွဲ့လက်မှတ် (သို့) သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ
- CMU-eTEGS - MFU-TEP
တက်ရောက်မည့် ဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုရပါသည်ှိ ။ (လျှောက်ထားသူသည် ကိုယ်တက်လိုသည့် ဘာသာအတွက် လိုအပ်ချက်များကိုသာ လိုက်နာရပါမည်) ။ အမှတ်စာရင်းသည် ၂နှစ်အထိသုံးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ လျှောက်ထားသူဖြေဆိုထားသောအင်္ဂလိပ်စာ အမှတ်သည် အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းတွင်မပါရှပါကိကျောင်းသို့ပို့ပေးပြီး လိုအပ်ပါက ပထမစာသင်နှစ်ဝက် တွင်းစာရင်းပေးသွင်းခြင်း (သို့) ဘွ့ရဲ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ၁ တွင် စရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
အာဆီယံဒေသအတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံများတွင် အဆင့်မြင့် သင်ကြားခြင်း နှင့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၊ကျွမ်းကျင်ထူးချွန်သော ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်ဝ၍ ဦးဆောင်နိုင်သော စိုက်ပိ်ျုးရေးကျောင်းဆင်းများ ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ထုပ်ပိုးကျွမ်းကျင်သော အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင်များ ထွက်ပေါ်လာစေရန်အထူးအလေးပေး သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. Food Science and Technology (အစားအသောက်နှင့် နည်းပညာ သိပ္ပံဘွဲ့  ) •	B.Sc. Postharvest Technology	(ရိတ်သိမ်းပြီးကာလနည်းပညာ သိပ္ပံ ဘွဲ့) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. Food Science and Technology (အစားအသောက်နှင့် နည်းပညာ သိပ္ပံ မာစတာနှင့် ပါရဂူဘွဲ့) •	M.Sc. Postharvest Technology and Innovation (ရိတ်သိမ်းပြီးကာလနည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲခြင်း မာစတာဘွဲ့)
နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးဖက် ဆိုင်ရာကျောင်း
အလှအပဆိုင်ရာ နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ရှေ့ဆောင်ပထမဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်တည်ထောင်ထားသော ကြောင့် ကျောင်းသူ ၊ကျောင်းသားများကို သုတေသနပြုခြင်း ၊ ခေတ်မီ၍ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာများဖြင့် လေ့ကျင့်မှု ၊ စမ်းသပ်မှုများစွာဖြင့် အထူးသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည် ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အလှအပဆိုင်ရာနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကျောင်းအဖြစ် မကြာမီကာလအတွင်းထိုးဖောက် အောင်မြင် မည်ဟုခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. Anti-Aging and Regenerative Medicine (နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးဖက်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ ) •	M.Sc. and Ph.D. Anti-Aging and Regenerative Science (နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးသိပ္ပံ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့) •	M.Sc. and Ph.D. Dermatology (အရေပြားရောဂါဗေဒ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့)
အလှပြင်ပစ္စည်း ဆိငုရ်ာနည်းပညာ ဘာသာရပ်ကျောင်း COSMETIC SCIENCE အာဆီယနံငို င်မျာံးထဲတငွ် ပထမဦးဆံုး အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ် ဂုဏယ်စွူာ ဖြင့် အလှအပဆိငုရ်ာ နည်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရပှိါသည်။ အလှအပဆိငုရ်ာကိစရ္စ ပ်များကို အထူးစိတ၀်င်စားသော ကျောင်းသားကျောင်းသမျူားအတွက် အကောင်းဆုးံ ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆငို ရ်ာဘာသာတိငုးကို အခြေခံမစှပြီး လက်တွေ့အသံုး ချနိငုသ်ည်အထိ သင်ကြားပေးပါသည်။ အလှကနုထ်တုလ်ပုေ်ရးစက်ရုံ များ ဖွင့် နိငုသ်ည်အထိ ကျွမ်း ကျင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရပှိါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. Beauty Technology (လှပခြင်းဆိုင်ရာ နည်းညာ) •	B.Sc. Cosmetic Science (အလှပြင်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာနည်းပညာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. Cosmetic Science (အလှပြင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာနည်းပညာ မဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့ )
သွားဖက်ဆငိုရ်ာဆေးတက္ကသလိုကျောင်း DENTISTRY သွားဖက်ဆငို ရ်ာ အသိပညာများကို လိလုားဆန္ဒရြှိ ခင်း ၊ ကိယုတ်င်ိုေ်လ့လာရှာဖွေခြင်း ၊ စွမ်း ဆောင်ရည်များနှငေ့် ဆးသိပဆ္ပံ ငို ရ်ာ ပံစုကျံသောတွေးခေါ်မျှော်မြင်မစှုသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြီးပြည်စ့ုံ သောသွားဖက်ဆင်ို ရ်ာဆေးကျောင်းသူကျောင်းသားများကိအုစဉ်အလာ ကြီးမြင်ေ့  စရန်သင် ကြားပိခ့ျုလျက်ရှိ ပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	D.D.S. Doctor of Dental Surgery (Only for Thai citizens) (သွားဆရာဝန် ) (ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ)
သင်ခန်းစာများကို ဘန်ကောက်မြို့  ၊အရှုတ်လမ်း (အာသောကလမ်း) မယ့်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ တွင်သင်ကြားပေးပါသည် ။
ဆေးဝါးကျမွ်း ကျင်
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆင့်မြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး မြင့်မားစေရန် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီနည်းပညာများဖြင့် သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည။်သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တိုင်းကို အခြေခံမှစပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည်အထိ ရိုးရာနည်းပညာ ဒေသဆိုင်ရာနည်းပညာ များနှင့်ခေတ်မီနည်းစနစ်တို့ကိုပေါင်းစပ်၍ ထူးခြားဆန်းသစ်သောပညာရပ် များကိုသင်ကြားပေးပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.ATM. Applied Thai Traditional Medicine (Students should haveagood command of Thai language - Listening, Speaking, Reading, Writing) •	B.CM. Traditional Chinese Medicine (တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ) •	B.PT. Physical Therapy (အကြောကိုင်နည်းပညာကုထုံး) (Students should haveagood command of Thai language - Listening, Speaking, Reading, Writing) •	B.P.H. Public Health (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး) •	B.Sc. Environmental Health (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းပညာ) •	B.Sc. Occupational Health and Safety (ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း) •	B.Sc. Sports and Health Science (အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးနည်းပညာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.P.H. Public Health (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး)
အရည်အသွေးပြည့်မှီသော သူနာပြုများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ပြည်တွင်းတွင်သာမက နိုင်ငံတကာကပါ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဖက် အထက်ပိုင်းဒေသနှင့် မယ်ခေါင် နယ်စပ်ဒေသ တွင် မီးပြတိ်ုက်သဖွယ် လမ်းပြ၍ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ သူနာပြုအကူသင်တန်း •	Cert. for Practical Nursing (Only for Thai citizens) (ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ) ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.N.S. Nursing Science (Students should haveagood command of Thai language - Speaking, Reading, Writing)
မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်၏ တိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ ဘွဲ့ရပညာတတ်များနှင့် သုတေသနပညာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ စိတ်ကူးဥာဏ် အမျှော်အမြင် ကြီးမားပြီး၊ အားကျဂုဏ်ယူ ဖွယ်ကောင်းသော ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီသော၊ အမြင်စူးရှသော ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သောအ တတ်ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ပြိုင်ဘက်ကင်းအ တတ်ပညာရှင်များဖြစ်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးလိုသည့်အတွက် မယ့်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ်၏ သတင်းနှင့် နည်းပညာဌာနမှ လှိုက်လှဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Eng. Computer Engineering (ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ) •	B.Eng. Information and Communication Engineering (သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ) •	B.Sc. Computer Science and Innovation (ကွန်ပြူတာနှင့် ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲခြင်း သိပ္ပံဘွဲ့ ) •	B.Sc. Information Technology (သတင်းနည်းပညာ) •	B.Sc. Multimedia Technology and Animation (ရုပ်သံလုပ်ရှားမှုနှင့် တင်ဆက်မှုနည်းပညာ) •	B.Sc. Software Engineering (ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Eng. and Ph.D. Computer Engineering (ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့) •	M.Sc. Information Technology (သတင်းနည်းပညာမဟာဘွဲ့)
နယ်စပ်ဒေသရှိ ဥပဒေကျောင်းများတွင်ခေတ်နှင့်အညီ တိကျသေချာ သော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်သင်ကြားပို့ချ ရန်၊ အချို့ သောပညာရပ် နယ်ပယ်နှင့်မဆိုင်သော တရားရေးစီမံချက်များကို လည်းနားလည်တတ်ကျွမ်းရန် အရေးကြီးသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများကို သင်ကြားပေးပါသည်။ ဥပဒေဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားစေလိုခြင်း ရဲ့  ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိဥာဏ်ပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွါးစေရန် ၊ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စာတွေ့ပိုင်း အရသော်လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့ပိုင်းအရပါ လည်းကောင်း နားလည်သိတတ်ကျွမ်း စေလိုပြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ အရေးပါဆုံးဖြစ်သော လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊တရားမျှတမှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအ ပါအ ၀င် ဥပဒေပေါင်းများစွာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်၊၊
ရိုးရိုးဘွဲ့  •	LL.B. Laws (Students should haveagood command of Thai language - Listening, Reading, Writing) (ဥပဒေ) ဘွဲ့  လွန် •	LL.M. Laws (ဥပဒေမဟာဘွဲ့ )
စီမခံ န့်ခွေဲ ရးဘာသာ
ထိငုးနငို င်နံငှ့် ၄င်း၏ အနီးတစ်ဝကို ရ်ှေိ ဒသများမှ အစိုး ရဌာနဆိငုရ်ာများ၊ စက်မလှု က်မှု လုပင်န်းများ၊ အာဆီယကံူး သန်းရောင်းဝယ်ရေး တို့ အတွက် လုအိပ်သော လက်မအှု တတ်ပညာကျွမ်းကျင်သ၊ူ ခေတ်ပ်ညာတတ်လငူယ်များစွာကို မွေးထုတရ်န် ရည်ရယွပ်ါသည်။ စီး ပွားရေးဆိငုရ်ာဘာသာများစွာထဲမှာ အရေးပါဆံုး သောစီမခံန့်ခွမှဲု ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် ကမ်းလမ်းမှမျှုားကို ဘာသာရပ်ဆငို ရ်ာ သင်ရိးု ညွန်း တမ်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ခေတ်မစှီ နစ်ကျလှစွာ သင်ကြားပေးနေသည့်အပြင် အကျိုးအမြတ်အနေအ ဖြင့်နိငုင်ရံပ်ခြားရှိ နာမည်ကြီး တက္ကသလို မ်ျားသို့ အပြန်အလှနသ်ွားရောက် သင်ကြားနိငုေ်သာ အခွင့် အရေးများကို ချိတဆ်က်ပေးထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Acc. Accounting (စာရင်းကိုင်) •	B.B.A. Aviation Business Management (လေကြောင်းစီမံ) - Aviation Services (လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု) - International Aviation Logistics Business (နိုင်ငံတကာလေကြောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း) - Aviation Operations (လေကြောင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း) •	B.B.A. Business Administration (စီးပွားစီမံ) •	B.B.A. Hospitality Industry Management (ကြိုဆိုဧည့်ခံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) •	B.B.A. Logistics and Supply Chain Management (ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ) •	B.B.A. Tourism Management (ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ) •	B.Econ. Economics (စီးပွားရေး) ဘွဲ့  လွန် •	M.B.A. and Ph.D. Business Administration (စီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း) •	M.B.A. International Logistics and Supply Chain Management (နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပိုဆောင်ရေးနှင့် ကွင်းဆက်ထောက်ပံ့ခြင်းစီမံခန့်ခွဲ မှု ဘွဲ့ )
ဘာသာရပ်စေုံကျာင်း
နိငုင်ြံ ခားဘာသာစကားမျိုးစုနံငှ့် ယဉ်ကျေးမှု တိက့ုို အရည်အသွေး ပြည်ဝစွာဖြင့် တတ်မြောက်နင်ိုြ် ပီး သင်ထောက်ကပူစ္စည်း စံလုင်စွာ ဖြင့် အကောင်းဆံုး သင် ကြားပေးရန်ရည်ရယွခ်ျက်ဖြင့် ဖွငလ့် စှထ်ားပါသည်။ ထိငုး ဘာသာစကားနှင့် နိငုင်ြံ ခားဘာသာစကားမျိုးစုံ အတွက် ထူးချွန်ေပြာင်မြောက်သောသူ များဖြစ်လာစေနိငုေ်သာကျောင်းဖြစ်ပြီး နိငုင်တံကာနှငပ့် တ်သက်၍ စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် အစီအစဉ်များကို လေ့လာသင်ကြားရရှနိငိုေ် သာ ပြိုင်ဖက်မရှအိကောင်းဆံုး ကျောင်း ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. English (အင်္ဂလိပ်အထူးပြုဘာသာ) •	B.A. Thai Language and Culture for Foreigners (နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ထိုင်းဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝိဇ္ဇာဘွှဲု့) ဘွဲ့  လွန် •	M.A. and Ph.D. English for Professional Development (အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု မဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့)
ကိုယ်ပိုင်မိသားစုနှင့်တကွ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူသားအားလုံးကို အလေးထား ဂရုစိုက်နိုင်ရန် ဆရာဝန်ကောင်းများကို မွေးထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည။် လူနာများကိုအနီးကပ်ပြုစုခြင်း၊ မိသားစုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဆေးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကို ပြုမှုလုပ်ရှားမှုနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ဘာသာရပ်တို့ဖြင့် ပူးပေါင်းသင်ကြားပေးခြင်း၊ လူနာများ၏ဘ၀ ဆေးကုသ ခံယူနိုင်မှုနှင့်ရရှိ လာသောအရည်အချင်းရလဒ် အဖြေများအားလေ့လာနိုင်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ပြုစုကုသခြင်း စသည့်သင်ခန်း စာများကိုသင်ကြားပေးပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	M.D. Doctor of Medicine (Only for Thai citizens) (ဆရာဝန်ဘွဲ့) (ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ)
သိပဘံ္ပာသာရပ်ဆငို ရ်ာ
ခေတ်မသီပိပံ္ပ ညာရပ်များကိစုဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းလေ့လာပြီး နိငုင်တံကာ၏ တိုး တက်မလှုပုရ်ှားမှု နည်းပညာများ ၊ပညာရေးအရည်အသွေးမြှငတ့် င် ခြင်းများကို အဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကျွမ်း ကျင်၊ တော်ထက်မြက်သော ပညာတတ်များကိေုမွးထုတြ် ခင်းဖြင့် သိပနံ္ပ ငှန့် ည်းပညာ ၊စီးပွါးရေး၊ လူမှေုရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆငို ရ်ာများကို ဖြွံ့ ဖိုးတိုး တက်မမျှုားကိရုရှိ စေရန် ဖြစ်ပါသည်၊၊ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. Applied Chemistry (အသုံးချ ဓါတု) •	B.Sc. Biotechnology (ဇီဝနည်းပညာ သိပ္ပံ ဘွဲ့ ) •	B.Eng. Materials Engineering (ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. Applied Chemistry (အသုံးချဓါတု) •	M.Sc. and Ph.D. Biological Sciences (ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သိပ္ပံ မာစတာနှင့် ပါရဂူဘွဲ့ ) •	M.Sc. and Ph.D. Computational Science (ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာ) •	M.Sc. and Ph.D. Materials Innovation (ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာဆန်းသစ်ပြောင်းလဲမာစတာနှင့် ပါရဂူဘွဲ့ )
ဆန်းသစ်သောလူမှုဆက်နွယ်ချက် ဆိုင်ရာကျောင်း SOCIAL INNOVATION ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူမှု ရေး ၊စီးပွါးရေးသုံးသပ်ချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသောစီမံကိန်းများ ၊ဆက်သွယ်ချက်များ လူမှုကွန်ယက်များ ၊ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှု ၊နိုင်ငံများ၏ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို အားလုံးပေါင်းစပ်၍ အနီးကပ် သင်ကြားပေးပါသည်။ ကျောင်းသားများ ယဉ်ကျေးမှုအဖုံဖုံ ၊လူနေမှုစရိုက်အမျိုးမျိုး ကို သိရှိနားလည်ပြီးကမ္ဘာတ ၀ှမ်း တိုးတက်အောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကိုယ်တွေ့လုပ်ဆောင် နားလည်နိုင်စေရန် သင်ကြားပို့ချပေးနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. International Development (နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဘွဲ့ ) ဘွဲ့  လွန် •	M.A. International Development (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး မာစတာဘွဲ့ )
တရုတဘ်ာသာရပ်ဆိုင်ရာ
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ၊ စီးပွါးရေး ၊ လူမှုရေး ၊နိုင်ငံရေး နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စသည့် ကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ၊ တရုတ်ဘာသာစကား ၊ ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာ လေ့လာသင်ယုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်နားလည် တတ်မြောက်သော အရည်အချင်း များနှင့် ပြည်စုံသော ဘွဲ့ ရပညာတတ်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. Business Chinese (လုပ်ငန်းသုံး တရုတ်ဘာသာ) •	B.A. Chinese Language and Culture (တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု) •	B.A. Chinese Studies (Focused on the Policy and Strategy of China)
(တရုတ်နိုင်ငံရေးနှင့် သေနင်္ဂဗျူဟာအတတ် အနီးကပ်ပို့ချခြင်း ၊လေ့လာခြင်း) •	B.Ed. Teaching Chinese Language (Only for Thai citizens) (တရုတ်ဘာသာဆရာအတတ်သင်) (ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ)
ကျောင်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်ဝက်စာသင်နှစ် • ပထမနှစ်ဝက်စ စာသင်ခြင်း • ပထမနှစ်ဝက်စာသင်ပြီးဆုံးခြင်း
သြဂုတ်လ နောက်ဆုံးအပါတ် ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပါတ်
• ဒုတိယနှစ်ဝက်စ စာသင်ခြင်း • ဒုတိယနှစ်ဝက်စာသင်ပြီးဆုံးခြင်း
ဇန္န၀ါရီလ နောက်ဆုံးအပါတ် ဇွန်လ အစ
ဇွန်လ နောက်ဆုံးအပါတ် သြဂုတ်လ လလယ်
ထိုင်းဘတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ * စာသင်ကြားရေးစရိတ်များ - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာဘွဲ့ကြို တန်းအတွက်ကုန်ကျမှုနှုန်းထားများ ၃၂၅၀၀ - ၇၈၀၀၀ ၁၀၁၆ - ၂၄၃၈ - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာဘွဲ့လွန် တန်းအတွက်ကုန်ကျမှုနှုန်းထားများ ၂၅၀၀၀ - ၁၄၃၀၀၀ ၇၈၂ - ၄၄၆၉ အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (ဘွဲ့ကြို) - ကျောင်းလျောက်လွှာတင်ခြင်း - အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးမြင့်တင်ရေး သင်တန်း Intensive English Programme - ပညာသင်နှစ်၏ နှစ်တစ်ဝက်စာတိုင်းအတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်း အတွင်းရှိ အဆောင်များတွင် လေးယောက်လျှင်တစ်ခန်းနေထိုင်ခြင်း ၊အဆောင်အတွင်းပစ္စည်းအသုံး - အဆောင်များ၏ ပျက်စီးမှုနှင့်ပက်သက်ပြီးအာမခံထားရှိရခြင်း (ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငွေပြန်လည်အမ်းပေးပါမည်။) - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာတိုင်းအတွက်အထွေထွေထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုစရိတ် - တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းနေထိုင်ရေးနှင့် ပညာသင်ကြား ရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအစီအစဉ် - ကျောင်းသားသစ်များအတွက် လိုအပ်မည့်အသုံးအဆောင်များရောင်းချပေးခြင်း - ကျန်းမာရေး အာမခံ( နှစ်စဉ်) - မယ့်ဖါလွမှတ်က္ကသိုလ်အတွင်း တည်ဆောက်ထားရှိသောဆေးရုံ၌ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း - ဘဏ်အကောင့်နှင့် ကျောင်းသားကတ်များလုပ်ဆောင်ခြင်း (ATM) အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (ဘွဲ့လွန်) - ကျောင်းလျောက်လွှာတင်ခြင်း - ကျောင်းသားရေးရာစာရင်းသွင်းခြင်း - ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်များ၏ ပျက်စီးမှုနှင့်ပက်သက်ပြီးအာမခံထားရှိရခြင်း (ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငွေပြန်လည်အမ်းပေးပါမည်) - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာတိုင်းအတွက် အထွေထွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုစရိတ် - အားကစားခန်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ၀န်‌ဆောင်ခ (နှစစ်ဉ်) (ချင်းရိုင်းနေ ကျောင်းသားများသာ) - ကျန်းမာရေးနှင့်မတော်တဆမှုများအတွက် အာမခံထားရှိခြင်း (နှစ်စဉ်) - သူတပါး ထိခိုက်မှူ အာမခံ (နှစစ်ဉ်) (ချင်းရိုင်းနေ ကျောင်းသားများသာ) - ဘဏ်အကောင့်နှင့် ကျောင်းသားကတ်များလုပ်ဆောင်ခြင်း ( ATM)
၁၀၀၀ ၂၁၀၀ ၅၉၀-၁၅၆၀
၃၂ ၆၆ ၁၉-၄၉
၃၀၀ ၂၀၀၀ ၅၀၀၀
၁၀ ၆၃ ၁၅၇
မှတ်ချက်။	။ * အမေရိကန် ၁ဒေါ်လာ=၃၂ ဘတ် (အပြောင်းအလဲရှိသည်) မယ့်ဖွါလွမ် ကျူရှင်စရိတ်များကို ယခင်နှစ်များထက်လျှော့ချ ထားပေးပါသည်။
International Affairs Division Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100 Thailand Tel: +66 (0) 5391 6024 Fax: +66 (0) 5391 6023
Fact Sheet 2019 - Myanmar